नेपाल कसरी बन्छ ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नेपाल कसरी बन्छ ?
२०७१ पुष ६, आईतवार ०३:१९ गते
‘नेपाल किन बन्न सकेन ?’ भन्ने बहस सुरू भएपछि यस सन्दर्भको सेरोफेरोमा छ दर्जन लेखहरु प्रकाशित भैसकेका छन् । मौखिक बहसको फेहरिस्त त अझ लामै छ । नेपाल किन बनेन ? भन्ने प्रश्न गर्न जति सजिलो छ, त्यसको उत्तर प्राप्त गर्न त्यत्तिकै जटिल छ । तथापि, यो एउटा सार्थक र गहकिलो बहसको आरम्भचाहिँ भएको छ भन्ने कुरा प्रश्नमाथि आइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध विचारहरुले प्रमाणित गरेको छ ।
अहिलेसम्मका बहसहरु हेर्दा नेपाल बन्यो वा बनेन भन्ने सन्दर्भमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । धेरैको मत नेपाल बनेको छैन भन्ने सन्दर्भमा आए पनि केही स्तम्भकारहरुले नेपाल किन बनेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । नेपाल किन बनेन ? भन्ने प्रश्न जति मह¤वपूर्ण छ, नेपाल बन्दै नबनेको हो त ? भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै मह¤वपूर्ण छ । सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ भन्ने कतिपयले देश नबनेको होइन, बनेको छ, बरू बनेको देख्ने सकारात्मक आँखा भएनन् भन्ने दाबी गरेका छन् । यो दाबीलाई पनि पूर्णतः इन्कार गर्न नसकिएला ।
प्रजातन्त प्राप्तिपछिको ६ दशकको इतिहास हेर्दा नेपाल बन्दै नबनेको भन्न पनि मिल्दैन । विगत ६० वर्षको यात्रा हेर्दा नेपालमा धेरै परिवर्तन भैसकेको छ । यो सत्य हो, तर कुनै पनि कुरा आफैँमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन, तुलना गरेपछि मात्र त्यो कति राम्रो वा कति नराम्रो भन्न सकिन्छ । विकासको सवाल पनि त्यही हो । विकास सूचकाङ्कमा केही दशकअगाडि नेपालसँगै रहेका देशहरुले धेरै माथि फड्को मारेको देख्दा नेपाल बन्यो भन्ने विचारमा पूर्णतः सहमत हुन सकिँदैन । देशमा भएका विकासका कुरामा सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ, तर त्यो सकारात्मक सोच सीमाभन्दा बढी भयो भने सकारात्मक सोच पनि विकास र परिवर्तनको बाधक बन्छ । भनिन्छ, मानिसको यथास्थितिप्रतिको असन्तुष्टि नै विकासको मूल कारण हो ।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको भौतिक विकासको आँकलन गर्दा अपेक्षाकृत विकास नभए पनि केही बाटो, पुल, विद्यालय, अस्पताल, भवनलगायतका आधुनिक संरचना निर्माण पनि भएका छन् र यो नै विकासको सूचक हो भन्ने मत पनि एकथरीको छ । तर, आधुनिक समयमा कुनै बाटो, सडक, पुल, भवनमात्र देश बन्यो भन्ने सूचक होइन, बरू जनताको सन्तुष्टिको मात्रा कति छ र मानव विकास सूचकाङ्कमा जनताको जीवनस्तर कति माथि उठेको छ भन्नेचाहिँ विकासको सूचक हो । समग्रमा विकासप्रति जनताको सन्तुष्टि नै नेपाल बन्यो भन्ने मूल आधार हो । अहिले बुृद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, लेखक, डक्टर, इन्जिनियर, विकासविद्, योजनाविद् मात्र नभएर बहुसंख्यक नेपाली जनता नेपाल बनेको छैन भन्ने मत राख्छन् भने नेपाल बनेको भनेर कसरी
भन्ने ? अपेक्षाकृत बनेको छैन भन्ने निष्कर्षमा नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । बरू, आगामी दिनमा हुने बहसमा जोड्नैपर्ने एउटा पक्षचाहिँ के हो भने नेपाल बिग्रेको हो कि नबनेको मात्र हो ?
नेपाल किन बनेन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न हो र यसको जवाफ पनि गम्भीर नै चाहिन्छ । तर, अहिलेसम्म जे–जति विचारहरु आएका छन्, ती अधिकांश सुझावमुखी छन् । विचारमा असन्तुष्टि बढी मिसिएका छन् । अधिकारमुखी बढी छन्, तर कर्तव्यमुखी कम छन् । राजनीति सही बाटोमा हिँडेन, नेताहरु असल भएनन्, सत्तामा पुगेपछि शासक परिवर्तन भए, विकासको राजनीतीकरण भयो तर राजनीतिमा विकास कहिल्यै एजेन्डा बनेन, विकास राजनीतिक खेती गर्ने हतियार मात्र भयो, व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भयो, नयाँ नेपालमा पुरानैहरुको हालीमुहाली भयो, बनाउने कोही भएन बिगार्ने मात्र भए, १० वर्षे द्वन्द्वले देशलाई २० वर्षपछाडि धकेल्यो, सरकारको नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन फितलो भयो, कर्मचारी भ्रष्ट भए, घूसखोरी र कमिसनतन्त्रले सीमा नाघ्यो, देश बनाउने कुरामा विदेशीको मुख ताक्ने काम भयो, प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग भएन, समयको सदुपयोग भएन, शिक्षा प्रमाणपत्रमुखी भयो, जनशक्ति खेर गयो, बचत गर्ने बानी बसेन, हाम्रो मनोवृत्ति सकारात्मक भएन, हाम्रो जन्मचेत नै गरिबी भयो, सकारात्मक सोच नै भएन, नेतालाई मात्र दोष लगाउने काम भयो, देश बनाउन सक्ने नेतालाई सत्तामा टिक्नै दिइएन भन्नेलगायत संघीयता नहुनु, ब्राह्मणवाद हाबी हुनु, बनेको चाहिँ नदेख्नु तर बिग्रेको मात्र देख्नुजस्ता कुराहरुलाई पनि देश नबन्नुको प्रमुख कारणका रुपमा औँल्याएको पाइयो ।
यो बहसमा सबैभन्दा चाखलाग्दो कुराचाहिँ के देखियो भने अधिकांशले दोष अरुको टाउकोमा थुपारेको देखियो । आफूले जिम्मेवारी लिन खोजेकोे देखिएन । थोरैले मात्र देश नबन्नुको दोषी ‘हामी’ पनि हौँ भनेको पाइयो, तर ‘म’ पनि दोषी हुँ भनेको अझै पनि पाइएन । दोष अरुलाई थोपर्ने आमनेपालीको बानी नै हो । यो बानीले अझै पनि निरन्तरता पाएको हेर्दा र जिम्मेवारीबोध नगरेको देख्दा यो मह¤वपूर्ण बहसले सार्थक रुप लिँदैन कि भन्ने आशंकाहरु चााहिँ अझै पनि बाँकी नै छन् ।
नेपाल बनेको छैन भने दोषी को ? धेरैले राजनीतिलाई दोष थोपरेका छन् । केहीले चाहिँ आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, कुशासन, वैदेशिक हस्तक्षेप र हाम्रो मानसिकताजस्ता कुराहरुलाई देश नबन्नुको कारण भनेका छन् । तर, समग्र कुरा के हो भने देश नबन्नुको कारण राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, जलनीति, कुशासन, अनुशासन जे भए पनि त्यसका पात्र हामी देशवासी सबै नै हौँ । भन्न यतिमात्र सकिन्छ कि जिम्मेवारी सबै पात्रको बराबर छैन । कसको कति जिम्मेवारी भन्ने कुरामात्र खुट्याउन बाँकी हो । यो दोषको भागेदार वर्तमान पुस्ता मात्र होइन, विगतको पुस्ता पनि हो । हुन सक्ला, विकासको रफ्तार यतिमात्र हुने हो भने दोषको भागी आउँदो पुस्ता पनि बन्ला ।
नेपाल धनीहरु बस्ने गरिब देश हो भन्ने अभिमत पनि सुन्नमा आउँछन् । के जनता धनी अनि देशचाहिँ गरिब भएकै हो त ? होइन, पटक्कै होइन । देश धनी बनेको छैन भने हामी कोही पनि धनी बनेका छैनौँ । देशचाहिँ बिग्रने अनि जनताचाहिँ प्रगति गर्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन । देश गरिब छ भने हामी सबै गरिब हौँ । फोहोर पोखरीमा बस्ने कोही सफा र कोही फोहोरी हुनै सक्तैन, न त कोही ओभानो र कोही भिजेको हुन सक्ला ।
नेपाल किन बनेन ? भन्ने अत्यधिक चासोको विषय रहेको कुरामा दुई मत छैन । तर, जति चासो छ, त्यति नै अन्यौलता पनि छ । अन्यौलता छ र नै बहस पेचिलो पनि बनेको छ । बहस प्रारम्भ–बिन्दुलाई बन्नुको पहिलो खुड्किलो मान्ने हो भने कम्तीमा पनि अब नेपाल बनाउने यात्रारम्भ भएको छ । बहसले राजनीतिज्ञदेखि विकासविद्सम्म, लेखकदेखि पत्रकारसम्म र बुद्धिजीवीदेखि श्रमजीवीसम्म सबैको मन–मथिंगललाई तरंगित बनाएको छ । हाम्रो देश बनेको रहेनछ, अब बन्नुपर्ने रहेछ भनी निदाएकाहरुलाई ब्युँझाउने काम गरेको छ ।
नेपाल किन बनेन भन्ने प्रश्नको उत्तर आउने क्रम जारी छ । दोष कसको भन्ने उत्तर पनि आफ्नो–आफ्नो बुझाइअनुसार आइनै रहेका छन् । तर, अझै पनि खड्केको कुराचाहिँ के हो भने नेपाल कसरी बनाउने भन्ने उपायचाहिँ कसैबाट पनि आएको पाइएन । समस्याको गाँठो यहीँनेर छ । हुन त, नेपाल बिग्रनुका कारणहरुको निराकरण नै नेपाल बन्ने आधारहरु हुन् भन्ने मत पनि एकथरीको छ, तर बिग्रनुबाट रोक्नुमात्र बन्नु होइन, बरू यथास्थितिमात्र हो । हामीले यथास्थिति खोजेको होइन, अग्रगामी र दु्रत गतिको विकास र परिवर्तनको अपेक्षा गरेको हो । त्यो परिवर्तन राजनीतिकमात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक सबै ठाउँमा खोजेको हो । भौतिक विकासको मात्र कुरा गरेको होइन, आत्मिक विकासको पनि कुरा हो । चेतनाको विकास पनि अपेक्षा गरेको हो । नेपाल किन बनेन भन्दा पनि के गर्दा बन्छ भन्ने कुरामा अबको बहस केन्द्रित हुनु अपेक्षित छ ।